Infobip Launches Digital Cloud Contact Center Solution | Myanmar Business Today
HomeBusinessInfobip Launches Digital Cloud Contact Center Solution
Infobip, the global cloud communications company, has announced the launch of its new digital cloud contact center solution – Conversations, that will enable businesses to deliver omnichannel support for customers throughasingle interface for agents. Consecutively, Infobip also announced the launch of its chatbot building platform – Answers, which can be used in conjunction with Conversations, through the deployment of artificial intelligence and keyword-based chatbots, available across key messaging services such as Facebook Messenger, Viber, Live Chat, and SMS.
Founded in 2006, Infobip isaglobal leader in omnichannel communications, providingabroad range of messaging channels, tools, and solutions for advanced customer engagement, experience, authentication, security, support, and retention.
The company has reached more than seven billion people and devices through more than 800 carrier connections worldwide, allowing businesses the ability to reach their customers anywhere, anytime, throughavariety of channels.
“As the population in Myanmar become more tech-savvy, an omnichannel approach in communication is inevitable. To stay ahead of the curve, businesses must quickly adapt to satisfy the increasingly sophisticated and dynamic modern-day consumer, who prefer always-on support, and on their channel of choice. Conversations and Answers are the solutions for businesses looking to bring all these elements into one accessible platform, forasmooth, cost-effective, and scalable transition,” Fiona (Khin Nyein Thu), Country Manager, Infobip Myanmar, said.
With the global standards in mind, the Conversations platform has been refined and optimized to ensure maximum efficiency. Accessed through Infobip’s secure online cloud system, conversations will allow agents to log in and pick up on customer conversation where they left off – with no prior implementation or hardware. Thus, empowering agents with the ability to handle more than one query atatime, through the introduction of messaging channels and conversation history overasingle interface.
Conversations are also equipped with real-time dashboards and reporting, as part of its analytics function that allows business managers to monitor customer and agent-related activities. Hence, these data can be used to identify any challenges, for businesses to make the necessary adjustments to optimize working practices or workloads for improved overall performance and customer experience (CX).
Consecutively, Answers will offer additional functions to support service excellence, with its chatbot building platform that enables companies to build, test, and deploy artificial intelligence and keyword-based chatbots, managed via Conversations. Thereby, leaving agents with more time to focus on resolving complex queries, asacost-effective solution to support more customers with the same number of agents over chat apps. Added, the 24/7 always-on support through first contact inquiries chatbots will help to increase overall CX, by instantly replying to standard or ‘often received’ questions to keep customers happy.
Provisioned through the cloud, Infobip offersamarked differentiator – omnichannel connectivity (CPaaS) with contact center software stacked on top. Conversations and Answers used in conjunction will allow businesses to overcome the challenges associated with CX, satisfaction, and retention in the long run.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cloud ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Infobip မှ ၎င်းတို့၏ Conversations ခေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ် cloud ဆက်သွယ်မှုစင်တာနည်းပညာသစ်အား စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် omnichannel solution ဖြင့် ၎င်းတို့၏အေးဂျင့်များအတွက် single interface ကို အသုံးပြုကာ Conversations မှတဆင့် customer များဆီသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် chatbot တည်ဆောက်သည့် platform ဖြစ်သော Answers အား စတင် မိတ်ဆက်လိုက်ကြောင်း လည်း Infobip က ကြေညာလိုက်သည်။ ၎င်းကို ဉာဏ်ရည်တု (AI) အသုံးပြုခြင်းနှင့် keywords အခြေပြု chatbots မှတဆင့် Facebook Messenger ၊ Viber ၊ Live Chat နှင့် SMS ကဲ့သို့သော အဓိက စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းများတွင် Conversations နှင့်အတူ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Infobip ကုမ္ပဏီသည် omnichannel ဆက်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဦးဆောင်သူဖြစ်ကာ ပြီးပြည့်စုံသည့် customer engagement ကို အမျိုးမျိုးသော messaging channel များမှတဆင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ အသုံးပြု၍ လုံခြုစွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် customer လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင် ရန် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ Infobip ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ (ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်) ၈၀၀ ကျော်မှတဆင့် လူနှင့် စက်ပစ္စည်း စုစုပေါင်း ၇ ဘီလီယံ(ကျော်)ထိ ချိတ်ဆက် ဖြန့်ကျက် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို (မည်သည့်နေရာနှင့်) မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ customer များထံ ရောက်ရှိနိုင်စေပြီ ဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများအပြားက နည်းပညာ ကို ပိုမို ကျွမ်းကျင်လာတာနဲ့အမျှ ဆက်သွယ်ရေးပညာရပ်မှာ engagement ထိတွေ့မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် omnichannel ချဉ်းကပ်မှုကို ရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာရှိနေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး customer support ပေးနိုင်ဆိုရင် ခေတ်ကာလ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကို အကျွမ်းဝင်ပြီးသား modern-day customer တွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်ရန် customer တွေ ရွေးချယ်လာတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ကနေ လျင်မြန်စွာ လိုက်လျောညီထွေ တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ အလုပ်ဖြစ်ရုံသာမက အားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အကူးအပြောင်းတစ်ခု၊ လက်လှမ်းမီမယ့် platform တစ်ခုကို ရှာဖွေနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့ Conversations နှင့် Answers ဟာ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Infobip Myanmar ၏ Country Manager ဖြစ်သူ Fiona (ခင်ငြိမ်းသူ)က ပြောသည်။
Conversations platform ကို စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး ရောက်ရှိစေရန် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ Infobip ၏ လုံခြုံစိတ်ချရသောအွန်လိုင်း cloud စနစ်မှတစ်ဆင့် call center အေးဂျင့်များ သည် မည်သည့်နေရာမှမဆို စနစ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် customer များနှင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုကို ရပ်တန့်ထား သောနေရာမှ ပြန်လည် စတင်နိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Conversations က ခွင့်ပြုလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် hardware စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်ပြင်ဆင် တပ်ဆင်ခြင်းများ သီးခြားလုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အေးဂျင့်များသည်မက်ဆေ့ခ်ျပို့သည့် လမ်းကြောင်းများနှင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှု မှတ်တမ်းများမှတစ်ဆင့် တစ်ကြိမ်လျှင် မေးမြန်းမှု တစ်ခုထက်ပိုသော ဆက်သွယ်မှုများကို တစ်နေရာတည်းမှ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိစေမည် ဖြစ်သည်။
Conversations တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြသည့် dashboard နှင့် မှတ်တမ်းများ ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်း၏ သရုပ်ခွဲနိုင်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဦးဆောင်သူများသည် မိမိ၏ customer များနှင့် အေးဂျင့်များ၏ လုပ် ဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်နိုင်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းခွင် အလေ့အထများ တိုးတက် ကောင်းမွန်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်သာမက လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူတို့၏ အတွေ့အကြုံ (customer experience)အတွက် မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုမဆို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အဆိုပါ အချက်အလက် များအား အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် Answers က ၎င်း၏ chatbot တည်ဆောက်မှု platform နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဉာဏ်ရည်တု (AI)နှင့် keywords အခြေပြု chatbot များ တည်ဆောက်ရန်၊ စမ်းသပ်ရန်နှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုရန်၊ Conversations မှတစ်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲရန် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် ပေးအပ်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အေးဂျင့်များသည် ပိုမို ရှုပ်ထွေးသော မေးမြန်းချက်များကို အလေးထား အာရုံစိုက် တုံ့ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Chat application မှတစ်ဆင့် ပိုမိုများပြားသည့် customer များကို အေးဂျင့်အရေအတွက် မပြောင်းလဲဘဲ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ရန် စရိတ်သက်သာပြီး အကျိုးထူးစေမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် chatbot များတွင် ပထမဆုံးသော မေးမြန်းမှုမှတစ်ဆင့် ၂၄ နာရီ ၇ ရက်ပတ်လည် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှုက customer များ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေရန်နှင့် ပုံမှန် သို့မဟုတ် ‘မကြာခဏလက်ခံရရှိသော’ မေးခွန်းများအား ချက်ခြင်း တုံ့ပြန်ဖြေဆိုပေးခြင်းအားဖြင့် customer experience ကို ကျေနပ်အားရမှု တိုးတက်စေမည် ဖြစ်သည်။
Cloud မှတစ်ဆင့် Infobip သည် မတူကွဲပြားခြားနားသော ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနေပြီး omnichannel ဆက်သွယ်မှု (CPaaS) သည် contact center software နှင့်အတူ ထိပ်ဆုံး၌ရှိနေသည်။ Conversations နှင့် Answers ကို တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းအား ဖြင့် customer experience၊ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကဲသို့သော စိန်ခေါ်မှုများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက ကျော်လွှားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Previous articleMNA to fly special flights to Singapore
Next articleSolarHome Closes $2Million Series A-2 Equity Round